भनेकै समयमा ग’र्भ बस्नको लागि यो समयमा यौ’न सम्पर्क गर्नुपर्छ : डा. सबिना सिम्खडा – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/जिबनशैली/भनेकै समयमा ग’र्भ बस्नको लागि यो समयमा यौ’न सम्पर्क गर्नुपर्छ : डा. सबिना सिम्खडा
दैनिक जस्तो शारिरिक सम्पर्क गर्दा वा म’हिनावारी भएको १० देखी २० दिन भित्र सम्पर्क हुँदा पनि बच्चा बसेन भने तुरन्त सम्बन्धीत चिकित्सकलाई देखाउनु पर्ने उनले सुझाएकी छिन् । पहिले नेपालका बिरामीहरु भारत जान्थे तर अहिले भारतबाट बाँ’झोपनाको उपचार गर्न नेपाल आउने गरेको डा.सबिनाको अनुभव छ । उनको क्लिनिकमा पनि धेरै भारतीयहरु आएर सेवा लिएका छन् । -janaboliबाट साभार